Aqoonsiga muuqaalku waa ka muhiimsan yahay sida dad badani aaminsan yihiin. Astaantu si fudud uma meteleyso nooc, badanaa waxay leedahay macnayaal badan oo xitaa raadraaci kara taariikhda shirkadda. Shirkado badan ayaa u adkeysanaya bedelida astaanta. Waxaa laga yaabaa inay ku qarashgareeyeen lacago badan summadaynta, ama waxay ka walaacsan yihiin kharashka iyo dadaalka loo baahan yahay markii dib loo magacaabayo. Waxaan aaminsanahay inaan ku hagaajinayo astaantaada si aan labadaba u haysto
Arbacada, Oktoobar 15, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhawr sano ka hor, waxaan ka qayb galay tababar ku saabsan talo soo jeedinta saaxiibkay Doug Theis oo ku saabsan isku xirka. Doug waa isku xirka ugu fiican ee aan ogahay sidaa darteed waan ogaa kaqeybgalkiisa inay faa iido leedahay… wayna dhacday. Waxa aan bartay waxay ahayd in dad badani qalad ku galaan inay qiimo saaraan isku xirnaanta tooska ah, halkii ay ka ahaan lahaayeen xiriirka dadban. Tusaale ahaan, waan bixi karaa oo waxaan isku dayi karaa inaan la kulmo shirkad kasta oo tiknoolajiyad suuq geyn ah si aan u arko haddii ay iyagu yihiin